Firxadka Dadka Reer Atoobiya oo Hafiyey Afrika iyo Aasiiya – Rasaasa News
Firxadka Dadka Reer Atoobiya oo Hafiyey Afrika iyo Aasiiya
Jijiga, June 2, 2014 – Masar oo Qabatay 77 ruux oo Atoobiyaan, ka dibna dib ugu celisay. Dadkaas oo doonayey in ay galaan dalka Israa,iil. Maalmo ka horna ayaa la xidhay kooxo Atoobiyana oo si dhuumaal ah koonfurta Masar ku soo galay, kuwaas oo doonayey in ay galaan Israa,iil si ay uga shaqaystaan.
Wargaysyada dawliga ah ee Mena iyo Al-ahraam ayaa sheegay in la qabtay muhaajiriin Atoobiya ah. Muhaajiriinta ayaa, lagu qabtay koonfurta gabalka Aswan ee xiga dhinaca dalka Sudan. Dadkan waxaa la qabtay labo todobaad ka hore waxaana la celiyey Axadii, ka dib kolkii ay ka wadahadleen Safaarada Atoobiya ee Masar.
Ciidanka nabadgaliyada ayaa sheegay in ay ku jireen dadka qaxootiga ah ee Atoobiya saddex caruur ah. Waxayn dadkaasi baadhid lagu sameeyey sheegeen in ay doonahayeen in ay tagaan gabalka Siinaay, ka dibna u talaabaan Isarr,iil si ay uga shaqaystaan.
Xidhiidhka labada dal ee Masar iyo Atobiya ayaa xumaaday, markii labadan dal ee geeska Afrika ay isku qabteen dhismaha biyo xidheenka korntada dhaliya, kaas oo ay Masar ka cabsai qabto in uu waxyeeleeyo qaybta ay ku leedahay biyaha wabiga Nile.
Masar ayaa sheegtay in ay had iyo goorba celiso dadka Afrikaanka ah ee doonaya in Masar ay ka galaan dalka Israa,iil, kuwaas oo shaqo doon ah.
Sidan si la mid ah, ayaa dalka Yeman waxaa lagu qabtay Qaxooti badan oo Atoobiyaan ah, kuwaas oo lagu celinayo Atoobiya. Todobaad walba waxaa lagu qabta dalalka Koonfurta Afrika dad Atoobiyaan ah oo Qaxooti ah, kuwaas oo dalkooda uga cararay arimo nabadgaliyo xumo iyo nolal la,aan.